आजको अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण, यो रिजुम महत्त्व overestimate गर्न गाह्रो छ। त्यो यो संस्था मुख्य तपाईँले आन्तरिक बैठक गर्न प्रभावको सिर्जना गर्छ। काम मा राम्रो disclosed गरिनेछ कौशल, अधिक संभावना दावेदार थप साक्षात्कार लागि निमन्त्रणा र इच्छित स्थिति प्राप्त गर्न।
पठाइएको उम्मेदवार उपयुक्ततामाथि र स्वयंसमर्थता केही निष्कर्ष र थप प्रश्नहरूको तयार गरिनेछ आकलन गर्नेछ जानकारी आधारमा। के तपाईं प्रतियोगिता अगाडि आफ्नो संभावना सुधार गर्न, काम मा कौशल बताउँदै, थाहा हुनुपर्छ?
पहिले, जानकारी को प्रस्तुति धेरै प्रकार छन्:
1) कालक्रमअनुसारको: उपलब्धिहरू र उल्टो क्रममा सबै अघिल्लो ठाँउ काम (फिर्ता अगाडि देखि वर्णन);
2) कार्यात्मक: एक रिजुम मा कौशल विषयगत समूह (विभाजित छन् जस्तै, अनुभव मानिसहरूलाई, प्रविधि संग अनुभव, आदि) सँग;
3) मिश्रित: यो organically दुवै प्रकारका लाभ जोडती।
हरेक कर्मचारी सबै पढ्न तपाईं आवेदक लेखे। तसर्थ, ठूलो काम गर्न सक्ने क्षमता र कौशल, अधिक तिनीहरूले अरूलाई सम्बन्ध मा राखिएको हुनुपर्छ। कि यो मूल्यांकन हुनेछ, फिट वा छैन। दोस्रो आधा मा, पेशा गर्न अप्रत्यक्ष सम्बन्धित कि माध्यमिक जानकारी छोड्न गर्छन (जस्तै, अतिरिक्त भाषा वा पाठ्यक्रम र सम्मेलन प्रमाणपत्रहरू उपलब्धता को ज्ञान)।
जो छन् विशेष सक्रिय अघिल्लो जब संलग्न गरिएको, -: (बिक्री sociability र मित्रता उदाहरण) को कर्मचारी अक्सर कौशल फेरि सुरु गर्न सम्बन्धित सोध्छन्।
लेख्दा केही आधारभूत सिद्धान्तहरू पालन गर्नुपर्छ:
1 Brevity। एक बहुमूल्य स्रोत विशेष गरी मानिसहरूले व्यापार गरिरहेको लागि, - समय सम्झना। अध्ययन अनुसार, कर्मचारी, दुई मिनेट भन्दा एक कुनै आवेदन पढेर मा बिताउनुहुन्छ। कुनै एक आपूर्ति पाठ को एक ठूलो रकम मूल्यांकन हुनेछ। कथा र व्याख्यामा सुरु गर्न छैन विचार सुत्छन् छैन। कम्प्याक्ट लेख्न, के कटौती गर्न सकिन्छ कम।
2. संरचना र शैली। प्रस्तुति को थप शैली, को सजिलो पढ्न र बुझ्न छ। तपाईं प्रस्तुति विभिन्न प्रकारका संयोजन भने पनि, तिनीहरूलाई प्राकृतिक हेर्न बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। को विषयगत विभाजन लागि कुनै थप दुई भन्दा मापदण्ड प्रयोग गर्नुहोस्।
3. सत्यवादी हुनुहोस्। कौशल र उपलब्धिहरू वर्णन, इमानदार हुन। आखिर, त्यहाँ साक्षात्कार को एक ट्रेस छ, र साक्षात्कार लागि - काम। त्यहाँ ठगी प्रकट गरिने बलियो likelihood छ। प्रमाणित र लिखित गरेका पुष्टि गर्न तयार हुनुहोस्।
4 साक्षरता। व्याकरण र मा लेखिएको पाठ जाँच विराम त्रुटिहरू। मानव चेतना सीधा साक्षरता क्षमता सम्बन्धित छ। कसैले त्रुटिहरू संग लेख्छन् गर्ने प्रबन्धक लेना चाहन्छ। हतार छैन, समय जाँच खर्च।
तपाईं एक रचनात्मक आवश्यकता स्थिति लागि आवेदन गर्दै हुनुहुन्छ भने, असामान्य रिजुम मा क्षमता र कौशल बारेमा लेख्नुहोस्। convincingly प्रयास र चाखलाग्दो तपाईं यो क्षेत्रमा उपयोगी हुनेछ भन्दा तपाईं, यो काम प्राप्त गर्नुपर्छ किन पाठक गर्न व्यक्त। सायद आफ्नो रिजुम को औपचारिक सुविधाहरू तपाईं कर्मचारी चासोको विषय हुनेछ र प्रतिज्ञा साक्षात्कार हासिल गर्नेछ, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी भन्दा कमजोर हुन, तर स्मार्ट र कौशल हुनेछ।
Logistician: जो के गरिरहेको छ
के गार्ड को सारांश हुनुपर्छ। नमूना
रिजुम लेखन सुझावहरूको। बिक्री प्रबन्धक: नमूना रिजुम
फेरि सुरु गर्न वस्तु "कौशल" मा कसरी भर्न
नौकरीको लागि पुन: सुरुवात कसरी लेख्न र इच्छित ठाउँ प्राप्त गर्ने?
सारांश को तयारी मा व्यावसायिक कौशल र व्यक्तिगत गुणहरू
नयाँ उत्पादन - ट्रक KAMAZ 4308
Obstetric Gestational उमेर र वास्तविक। अल्ट्रासाउंड द्वारा Gestational उमेर निर्धारण
Nokia x3: तस्बिर, समीक्षा, निर्देशन, विशेषताहरु। Nokia H3-02: विशेषता
विशेषज्ञता कानुनी शुद्धता अपार्टमेन्ट !!!
उद्धार हेलिकप्टर रूस EMERCOM: सिंहावलोकन, वर्णन र फोटो
पेंशनर्स द्वारा आवास खरीद को लागी कर कटौती
दबाइ 'Topikrem' छोराछोरी र वयस्कहरूको लागि
Anton Putsila: एक फुटबल खेलाडी को जीवनी र क्यारियर
Ovary थकान सिंड्रोम - आधुनिक महिलाहरु को वास्तविक समस्या
मोबाइल फोन TEXET: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों र मालिकको समीक्षा
रूस मा baroque शैली। रूस मा baroque प्रतिनिधिहरु